Kedụ ka I si enyocha Social Media? | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 21, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ma ị ga-esonye ma ọ bụ na ị gaghị esonye, ​​enwere ọtụtụ ihe iji nyochaa mgbasa ozi mmekọrịta na ụlọ ọrụ ọ bụla ugbu a:
Ilebara ụlọ ọrụ gị anya nwere ike inyere gị na ndị ọrụ gị aka inweta nka.
Ilebara ndị na-asọmpi gị anya nwere ike inyere gị aka ịchịkọta ọgụgụ isi ịsọmpi wee nyere gị aka ịkọwa ọdịiche azụmahịa gị ma ọ bụ ngwaahịa gị.
Nyochaa nwere ike inyere gị aka ịmata ndị isi na saịtị nwere ikike na mmetụta na ụlọ ọrụ gị.
Nyochaa nwere ike inyere gị aka ịchọta ihe omume dị mkpa iji sonye (ịga ma ọ bụ kwuo okwu).
N'ezie, nlekota oru ga - enyere gị aka ịchọta aha azụmahịa gị iji nyochaa mmetụta, kwalite nkwalite ndị ahịa / ekwuru.
Nlekota ga enyere gi aka imata nsogbu ndi oru choro iji dozie n’ihu oha - ma obu nye gi ihe omuma ichoro iji melite ahia ma obu oru gi.
Na nlekota ga-enye gị ohere itinye uru na mkparịta ụka.
DK New Media amalitela ya ọrụ nlekota oru Social Media maka ndị ahịa ya dị ka ihe bara uru-tinye na mmekọrịta anyị dị ugbu a. Ọ bụrụ n’ị nwere mmasị ịnye ya nnwale ule, biko mee ka m mara. Anyị ga-enye ọrụ ahụ maka $ 499 kwa afọ kwa ụlọ ọrụ (ihe ruru 5 logins) ndị na-abụghị ndị ahịa anyị.
Enweela m nsogbu ịchọta ndị mmeri maka $ 10,000 na-akwụ ụgwọ… dịka ndị folks ji ọrụ n'aka na-agụ ozi ịntanetị n'ezie ịza ha! Yabụ - anyị ga - eme ihe dịtụ iche iji nye onyinye anyị! Vontoo na-bụ ọrụ izi ozi olu nke ahụ ga - enyere gị aka idekọ ma zipụ nchetara, ọkwa nchịkọta, na ndị ahịa gị. Ndị folks 2 nke izizi nwere ike ịchọta ọrụ a bara uru ga-emeri akaụntụ ahịa azụmaahịa ọkachamara !!! Zaghachi email a na Vontoo! n'isi okwu gwa anyị otu ị ga-esi jiri ngwa ahụ - anyi ga-ekwe ka ndị folk na Vontoo họrọ ndị mmeri.